Araka ny tatitra nivoaka nandritra ny filan-kevitry ny governemanta omaly, amin’ny volana jolay ho avy izao no hanomboka hivoaka ny vola 20.000 ariary tokana. Ny mampanahy ny maro dia hiakatra hanaraka izay ihany koa ny vidim-piainana eto amintsika. Hisy ihany koa ny fanontana vola 100, 200, 500, 100, 2.000, 5.000 ary 10.000 ariary vaovao amin’ny volana jolay sy septambra.
Miaramila miisa 900 avy amin’ny firenena avy aty amin’ny ranomasim-be indianina sy Frantsa mivondrona ao anatin’ny FAZSOI no ho avy eto Madagasikara hanao ilay hetsika “Ivondro 2017” ny 26 hatramin’ny 31 may ho avy izao. Araka ny fantatra dia any Toamasina no hanaovana io hetsika io ka miaramila maromaro avy amin’ireo toby misy manerana an’i Madagasikara no handray anjara amin’izany.
Nisehoana asa fampihorohoroana nahafatesana olona 22 nandritra ny fampisehoan’ilay artisa amerikanina malaza Ariane Grande tany Manchester ny alin’ny alatsinainy lasa teo tokony ho tamin’ny 10 ora. Mbola tsy fantatra hatreto ny olona nahavanona ity asa fampihorohoroana ity na dia efa manao izay tratry ny heriny aza ireo mpitandro filaminana any an-toerana. Ao anatin’ny fitetezan-tany amin’ilay fampisehoana “Dangerous women tour” ity mpanakanto ity no tratran’izay asa fampihororoana izao.